Al-shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ka tirsan Gobolka Hiiraan | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Al-shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ka tirsan Gobolka Hiiraan
Al-shabaab oo dagaal kula wareegay degaan ka tirsan Gobolka Hiiraan
Wararka aan ka heleyno deegaan ku dhow degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraan ayaa waxaa ay sheegayaan in gelinkii dambe ee shalay halkaas uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka Maamulka Hirshabeelle iyo Al-shabaab.
Dagaalkaan ayaa waxaa uu yimid, ka gadaal markii Al-shabaab ay weerar dhow jiho ah ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Teydaan oo ku dhow degmada Maxaas oo ay ku sugnaayeen Ciidanka Hirshabeelle.
Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda dhinaca Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegteen inay si buuxda ula wareegeen gacanta ku heynta deegaanka Teydaan, kadib dagaalkii halkaas ka dhacay.
Sidoo kale Shabaabka ayaa waxaa intaas kusii dareen in xiligii ay weerarka ku qaadayeen deegaanka uu ku sugnaa Guddoomiyaha degmada Maxaas ee Gobolka Hiiraaan iyo Ciidamo ilaalo u ahaa, kuwaasi oo ay sheegeen inay aadeen dhinaca Maxaas.
Weli si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii dhacay, mana jiro wax war ah oo kasoo baxay Maamulka Hirshabeelle iyo Saraakiisha Ciidamada Xoogga qeybta 27-aad ku saabsan la wareegida Al-shabaab ee Teydaan.
Si kastaba dagaalamayaasha Al-shabaab ayaa dhowr jeer sidaan kale u qabsaday deegaano ka tirsan Gobolka Hiiraan, wallow ay dib isaga baxeen, ayna markii dambe la wareegeen Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa Maamulka Hirshabeelle.
Maqaal horeMadaxweynaha Puntland oo socdaal gaar ah ku tagay Magaalada Addis Ababa
Maqaal XigaKhasaaro nafeed oo ka dhashay Roobab ka da’ay Magaalada Muqdisho